Magaalada ugu weyn Australia waxay gashaa xirid laba toddobaad ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Magaalada ugu weyn Australia waxay gashaa xirid laba toddobaad ah
Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
In ka badan hal milyan oo qof oo ku nool aagga hoose ee magaalada Sydney, iyo sidoo kale xaafadaha ku dhow dhow, ayaa durba la xirey jimcihii, laakiin saraakiisha ayaa go'aansadey in tallaabooyin adag oo dheeri ah ay lagama maarmaan tahay in lagu xakameeyo noocyada kala duwan.
Xanibaadaha cusub ee Sydney COVID-19 ayaa dhaqan galaya maanta.
Dadka degan Sydney waxay uga tagi karaan guriga shaqadooda muhiimka ah, daryeelka caafimaadka, waxbarashada, ama dukaameysiga.
Xiritaanka ayaa sidoo kale lagu dabaqay dhowr gobol oo ku hareeraysan Sydney.
Masuuliyiinta magaalada Sydney ayaa ku dhawaaqay in magaalada la gelinayo gebi ahaanba xirid muddo labo todobaad ah. Ku dhawaaqida xiritaanka waxay daba socotaa balaarintii hore ee talaabooyinka anti-Covid-19 ee meelaha qaar si loo xakameeyo faafida noocyada dilaaga ah ee Delta ee viruska.
Xayiraadaha, oo dhaqan galaya maanta, ayaa macnaheedu yahay Sydney deggeneyaashu kaliya waxay uga bixi karaan guriga shaqadooda muhiimka ah, daryeelka caafimaadka, waxbarashada, ama dukaameysiga. Mas'uuliyiintu waxay ku doodeen in tallaabooyinka loo baahan yahay si loo joojiyo faafitaanka noocyada faafa ee Delta. Sydney wuxuu horey uqoreeyay 80 kiis oo lalaxiriira COVID-19.
"In kasta oo aanan dooneynin inaan culeys saarno illaa aan si dhab ah u qasabno mooyee, nasiib darro tani waa xaalad aan ku qasban nahay," ayuu yiri Ra'iisul wasaaraha New South Wales Gladys Berejiklian
Xiritaanka ayaa sidoo kale lagu dabaqay dhowr gobol oo ku hareeraysan Sydney. Gobolka intiisa kale waxay xad ku yeelan doontaa isu imaatinka dadweynaha waxayna u baahan tahay waji-dabool gudaha.
In ka badan hal milyan oo qof oo ku nool aagga hoose ee magaalada, iyo sidoo kale xaafadaha ku dhow dhow, ayaa durba la xirey jimcihii, laakiin saraakiisha ayaa go'aansadey in tallaabooyin adag oo dheeri ah ay lagama maarmaan tahay si loo xakameeyo noocyada kala duwan.
Xayiraadihii ugu horreeyay ee la beegsaday waxaa dhaleeceeyay qaar ka mid ah xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, kuwaas oo ku baaqay in gebi ahaanba magaalada laga xiro. Horraantii toddobaadkan, Berejiklian wuxuu ka digay in Sydney ay soo galayso "marxaladdii ugu naxdinta badnayd ee faafidda" sababo la xiriira faafitaanka noocyada Delta.
Ustaraaliya waxay kaga fiicnaatay quruumo badan oo kale dagaalka ka dhanka ah Covid-19, iyadoo diiwaan galisa 30,422 xaaladood iyo 910 dhimasho tan iyo bilowgii dhibaatada caafimaad.
Tallaabooyinka adag ayaa imanaya iyadoo dalal badan oo adduunka ah ay billaabeen inay dib ugu celiyaan tallaabooyinka COVID-19 iyadoo laga walaacsan yahay faafitaanka noocyada Delta, oo loo arko inay faafayaan.